Mee ya onwe gị n'ọkụ dị na mbara ubi Uche nka - echiche maka ulo na ubi
Mee ya onwe gị n'ọkụ dị na mbara ubi
22.07.2014 Bipụtara: Senti Art
N'elu akuku, Ubi ahụ, Maka ulo na ubi, Mee ya onwe gi
Ọ dị mfe iji aka gị mee ekwenti? N’ezie, ime ka ebe oku na ụdị oku oku dị iche iche bụ ọrụ nwere ihe nzuzo na nkọwapụta nke onye na-amụ ọrụ nyefere ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ụlọ ebe a na-emechi emechi emechi emechi emebere eme eme eme eme eme. Mepụta echiche a na-ewepụta n'ubi a bụ mbọ nke ndị na-abụghị ndị ọkachamara ga-eji rụọ ọrụ ya nke ọma. Enwere ike ịzụrụ ma ọ bụ zụta ụdị. N'ezie, na enweghi ihe omuma banyere ihe owuwu nke ulo, odi nkpa ka acho enyemaka nke ndi okacha mara. Uzo a gha eme nlebara anya nke oma, ma n’uche, ite a bu ihe di nfe iji me ya, na udiri nri nile di n’ime ya gha eme gi uto.
Dị ka anyị amaghị maka a Garden BBQ, a ghaghi iburu otutu nkọwa ma banye ya, karie ihe ozo, n’ebe ihe adighi adi. Ọ bụrụ n’inwe mgbe niile na ebe a na-ewu mmiri, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya imeghe ebe a na - emeghe ya, ya na nke a abụghị ihe dị mkpa
Planninghazi ezigbo ọrụ bụ ihe nzuzo maka ọganiihu Hụ mmejọ gị tupu ịmee ha ga-azọpụta gị ego na oge. Enweghị atụmatụ zuru oke na nke zuru ụwa ọnụ. Mgbe ọ dị mkpa iwu ihe, enwere ọtụtụ puku nkọwa dị mkpa ka elebara anya. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji nye gị echiche na ụfọdụ nkọwa, ma maka nke ọzọ ị ga-etinye ọrụ na echiche echiche. Uzo oku dị oke mkpa. Ha na-akọwapụtakwa ọrụ ya, ntụgharị. ihe a ga-eji esi ya esi ma ọ bụ mee anwụrụ n’ime ya.
Buru ụzọ kpebie dayameta nke hearth (G) na ịdị elu ya (E). Dabere na ha, a na-ekpebikwa akụkụ mpụga nke ihe owuwu na-akwado (A, B, C, D) na ịdị elu nke chimni (F). Were gbakọọ akụkụ ọ bụla na-enweghị ihe ndenye (a na b), ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya otu, yana ụdị na ngalaba nke ngwungwu chọrọ (c) na ọkpụrụkpụ nke ihe (d). Ọ bụ ihe na-achọ mma ka ahụ chimini dịkarịa ala 50% dị elu karịa ọkụ ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịdị elu (E) bụ 50cm, mgbe ahụ, anwụrụ ọkụ kwesịrị ịdị elu (F) ma ọ dịkarịa ala 75cm (site na ntọala). Oghere na ịdị elu nke oghere vault / orifice oghere (e na f) kwesịrị ịdịkarịrị ihe dịka 50% nke ịdị elu ya (E). Ohere dị iche iche na ọdịdị na nke ga-ekwe omume, n'ihi na nke a bụ dabere n'ọnụ ụzọ, site na ha enwere ike ịchịkwa nsị. Ha, n'aka nke ọzọ, na - edobe ụlọ ebe a na - ere anwụrụ site na ahụ anwụrụ ọkụ, na - eke gburugburu akachara akara.
Họrọ akụrụngwa ihe owuwu ma gbakọọ ụdị ịchọrọ.
Typedị ihe owuwu a Ogige abeụ ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmebe ụkwụ, ebe ibu niile nwere ike ime ka ọ daa ma ọ bụ gbagọọ. Wụpụ ntọala nkwesi ike ahụ ma kwe ka imechi ya ike. Na ya wuru site na blọk ma ọ bụ brik ahụ nke atọ na-akwado ya, tinye mpempe akwụkwọ wee wụkwasị slab nke abụọ. Mgbe ọ kpọnwụsịrị, sere, dozie ma dozie ntọala maka ọkụ a ga-enwe n'ọdịnihu. Jiri brik ndị na-eguzogide ọkụ. Mee otu brick nke brick siri ike gburugburu ha, na-ahapụ ohere maka oghere ahụ. N'elu ha, n'akuku (iji nweta ọdịdị okirikiri) ahịrị ndị ọzọ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya, mgbe ị ruru n'usoro nke abụọ ma ọ bụ nke atọ, iji kpụọ oghere nke oghere ahụ. Nke a na - dabere na ọnụ ụzọ ma ọ bụ ọnụ ụzọ ahọrọ. Ọ dịkwa mma ịkwadebe kaadiboodu dị mma ma ọ bụ ndebiri nke styrofoam nwere ụdị na arc nke hemisphere. You ga - ahapụ ha n ’ụdị iji duzie gị ka ị na - ewu mgbe ị na - akwado ebe a. Na-arụ ọrụ nwayọ na usoro; hapụ oge zuru oke iji mechie akụkụ ọ bụla. You gụchaa oku na ngwakọta ndị ahụ siri ike, ị ga-enwe ike imebi ihe ndị a ma dọpụta ha n’olulu ahụ. Wepu njiko onu nke ihe dika 1 / 2 n'obosara ya site na hemisphere, na-ahapu oghere maka chimni. Ekwesịrị idobe ya nke mere na mgbe emechiri oghere ahụ, ikuku anwụrụ adịghị enweta ikuku oxygen. Ọtụtụ mgbe, a na-enyekarị mkpuchi mpụga nke mpụga, okwute, ụrọ na ọbụna mma eji eji akwa ma ọ bụ taịra terracotta. Mgbe ihe niile dị njikere, kwe ka nkụ kpamkpam ihe dị ka otu izu wee kpoo ọkụ gị.
ogige, ubi pizza ubi, igwe ojii, a hearth na yad, echiche, echiche maka ubi, echiche maka yad, echiche maka ulo, echiche maka ụlọ ahụ, echiche nke oku, chimni, mee mgbawa, me onwe gi oku, mee ya onwe gi, ebe a na-anyụ anyụ, oku, igbe n'ime ugbo, ekwenti n’ime yab, igbe pizza, igbe blọgụ, osikapa, echiche maka ulo, ime ime, arịa ụlọ, n'ime ime, imewe echiche, ụlọ ọgbara ọhụrụ, icho mma, nka nka
Ọnwa mara mma nke ọnwa Eprel abiawo. Oge erugo ịpụpụ arịa ụlọ na idozi ya ...
Ideasfọdụ echiche nka maka ụlọ ịsa ahụ gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ imebi echiche ọdịnala ...
Ihe dị mkpa banyere uzommeputa a bụ teknụzụ, ọ bụghị ihe mejupụtara. Ọ mara oke mma na ...
Udu-ubi Ogba-ulo - paradise n’ime ulo
Echiche nke n’ubi igba oyi na-amasị anyị oge ọbụla n’afọ. Ọtụtụ mgbe nke a na-eme na ọdịda, ...
Mee onwe gi okpokoro okpokoro
Anyị nwere ike ịme tebụl pịrị ọnụ dị ubi mgbe oke ikuku rute ...
Ihe ichoro mma nke ugbo
Ezigbo maka ime ụlọ e ji achọ mma nwere igbe na ifuru. Echiche na-adọrọ mmasị na ...
Mee ya onwe gị ihe mkpuchi akpa naịlọn
Enwere ụzọ dị iche iche iji mee onwe gị ihe mkpuchi ma ọ bụ ahịhịa nke eriri dị iche iche ...
Nri izizi izizi ime ụlọ
Anyị na-ewetara echiche ime ụlọ ime ụlọ isii mara mma na nke mbụ - njikọta ...